Cabdiraxmaan Cirro oo ku eedeeyay Maamulka Somaliland in uu ka qeybgalay Shirka Brussels | Baydhabo Online
Guddoomiyaha Xisbiga mucaaradka Waddani ee Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi (Cirro) oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa ku eedeeyay Maamulka Somaliland in uu wakiilo u dirsaday shirka lagu soo gabagabeeyay magaalada Brussels.
Siyaasiga mucaaradka Maamulka Somaliland C/maan Cirro ayaa ku tilmaamay siyaasada Arrimaha Dibada Somaliland mid marayso meel aad u hooseyso; ”Waxaa maanta meeshii ugu hooseesay maraya siyaasada arrimaha dibada Soomaaliland oo go’doon siyaasiyeed sii galaya maalinba maalinta ka dambeysa waxaa soo baxaya sawiro muujinaya in Somaliland maqaamkeedu hoos u sii socda” ayuu yiri Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka Soomaaliland ee Cirro.
Cabdiraxmaan Cirro ayaa shirkiisa jaraa’id ku sheegay in Maamulka Somaliland uu shirka ka dhacay Brussels ay u dirsadeen Feysal Cali Waraabe iyo Cali Khaliif Galeyr.
Sidoo kale guddoomiye Cirro ayaa ka hadlay arrimaha dhaqaalaha Somaliland isagoo sheegay in waxana uu sheegay in Somaliland ay ku jirto marxalad dhaqaale iyo habacsanaan Maamul, balse sheegay in mas’uuliyadiidaas ay qaadi doonaan Xisbiga Kulmiye.